बिजखबर संवाददाता २०७६ फागुन ३० (March 13, 2020) मा प्रकाशित
भारतले सिटामोललगायत विभिन्न खालका २६ प्रकारका औषधि निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा औषधिको कृतिम अभाव देखिएको छ । भारतले निर्यातमा रोक लगाएसँगै त्यसको अभाव हुनेभन्दै होलसेलदेखि खुद्रा पसलसम्म औषधि किन्नेको भीड लागेको छ भने विरामी नै नभईकन पनि उपभोक्ताले औषधि किनेर स्टकमा राख्न थालेका छन् । हाल भारतले रोक लगाएको औषधि उत्पादनका लागि नेपाली उद्योगीहरुनै सक्षम भएपनि सरकारले नेपालमै त्यस्ता औषधि उत्पादन गर्न प्रोत्साह गर्नुको सट्टा भारतलाई नै औषधि निर्यातमा रोक नलाउन अग्रह गर्दै आएको छ । तर, उद्योगीहरुभने अहिले औषधिको अभाव नहुने र सरकारले चाहेको खण्डमा भारतले रोक लगाएको औषधिहरु जति पनि उत्पादन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली औषधि उद्योगको अग्रणी नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा देउराली जनता फमास्यूटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मासँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार :
केही विशेष बाहेकका औषधिमा आत्मनिर्भर छौं भन्ने तर नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो कि बजारमा औषधिको नपाईने अवस्था बारम्बार किन आउँछ ?
नेपाली बजारमा औषधिको कुनै अभाव छैन । यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ । नेपालमा भएको र नेपाली कम्पनीहरुले बनाउने औषधिहरुको कुनै अभाव छैन ।
पछिल्लो समय फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण बजारमा कुनै समस्या सिर्जना भयो भने सरकारले औषधिको क्वान्टीफिकेसन गर्नुपर्छ । यदि अभाव भैहाल्यो भने सरकारले नै कुन देशबाट कति औषधि कति ल्याउने भन्ने बारे समेत क्वान्टीफिकेसन बनाउन सक्छ । यसको यकिन नभई नेपालमा औषधिको अभाव भयो भन्न सुहाउँदैन । तर, बजारमा नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको धेरै ठूलो अभाव छैन । हामीले चाहिनेजति दिन सक्छौं ।
केही औषधि नेपालमा पाईँदैन त्यस्ता औषधिका लागि भने सरकारले बजारमा यस्तो औषधि कति छ र कति आवश्यक पर्छ जस्ता कुराको डाटाबेस बनाउनुपर्छ । त्यहीं अनुसार विभिन्न देशबाट ल्याउनलबिङ गर्नुपर्छ । जसमा उपभोक्ताले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।तर, नेपालमा बन्ने औषधिहरुको हकमा भने कुनै अभाव हुँदैन ।
भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएका २६ प्रकारका औषधिहरुको अवस्था नेपालमा के छ ?
तपाईँहरुले भनेजस्तो भारतले प्रतिबन्ध लगाएको कच्चा पदार्थ हाम्रो कम्पनीले भारतबाट किन्दैन । त्यसकारण हामीले अन्तै स्रोतहरुबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने हुनाले हामीसँग पनि ती औषधिहरु छन ।
हामी जति पनि दिन सक्छौं । तर नेपाली बजारलाई सोचेभन्दा धेरै औषधि चाहिने भयो भने त्यसका लागि पनि नयाँ तरिकाले प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ । नेपाली बजारलाई कति औषधि चाहिने हो भनेर प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले बजारको मागलाई धान्ने गरी उत्पादन दिन सक्छौं । तर कोरोना भाईरसका कारण नेपाल पनि संक्रमित हुन पुग्यो भने त्यसलाई चाहिने केही बस्तुहरु भने आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि लिस्टीङ नै गर्नुपर्छ । औषधि मात्रै नभनेर मास्क, डाक्टरहरुले लगाउने पन्जा, सिरिन्ज लगायतका बस्तुहरुका लागि भने सोही अनुसारको तयारी गरिनुपर्छ ।
कोरोना भाईरस संसारमा पहिलोचोटी भेटिएको भाईरस हुनाले यसका लागि विश्वबजारमा विशेष उपकरणहरु बनेका छन् जसलाई नेपालमा ल्याउनका लागि निजी क्षेत्र र सरकार लागिपर्नुपर्नेछ । जसमार्फत नेपालमा यसको प्रकोप रोकथाम र चेकजाँच गर्न सजिलो हुनेछ । तर, हामीहरु पनि यसमा सजग हुनु जरुरी छ ।
बजारमा औषधि नपाईने होकी भन्ने त्रास फैलिएको छ । यसले गर्दा एक बर्षलाई चाहिने औषधि उपभोक्ताले एकैचोटी किनेको भन्नेसम्म सुनिएको छ । के कारणले यस्तो अभावको हल्ला फैलियो होला ?
हामीले त बजारमा जति पनि औषधि छ भनेर सुचना निकालिरहेका छौं । तर जनतालाई अझै सूचना नपुगेको अवस्था छ । सरकारले पनि उपभोक्ताका लागि सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गरिराख्नुपर्छ । हामीसँग त्यस्तो अभाव भईसकेको छैन । यसको दुष्प्रचार भएर मात्रै बजारमा अभावको हल्ला चलाईएको हो जस्तो लाग्छ ।
नेपाली औषधि उद्योगहरुले बजारमा धेरै माग भएको मास्क र सेनिटाईजर समेत बनाउन नसक्ने रहेछन् है ?
यी बस्तुहरु औषधिको क्याटेगोरीमा पर्दैनन । यिनीहरु सर्जिकल उपकरण समुहमा पर्दछन । तर पनि यिनीहरु स्वास्थ्यसम्बन्धित बस्तुहरु नै हुन । तर नेपालमा यी बस्तुहरुको खपत बढी हुन्छ र सबै आयात नै गर्नपर्छ भने यसमा पनि अब केही सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले अब यस्ता बस्तुहरु नेपालमै उत्पादन गर्नेगरी काम अघि बढाउनुपर्दछ ।
यसको विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नेपालमै उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएजस्तो मलाई लाग्दैन तर नेपालमा बनाउन सकिने सम्भावना प्रशस्तै छ ।
बजारमा सेनिटाईजर र मास्क नभएर सबै काम रोकिएको छ भन्ने पनि छैन । हामीले मास्क पनि चौबिसै घण्टा लगाईराख्नुपर्छ भन्ने छैन । मास्क भनेको डाक्टरहरुले बिरामी जाँच गर्दा र भिडभाडमा जाँदा मात्रै लगाए पुग्छ । यस्तो प्रकारको सूचना सरकारले पनि फैलाउनुपर्छ । यस्ता कुरामा उपभोक्ता पनि आफै सचेत हुनुपर्छ । हाम्रो पिँढीलाई यस्तो प्रकारको प्रकोप आएको थिएन । हामीभन्दा अघिल्लो पिँढीमा आएपनि हाम्रो पिँढीमा भने यो नयाँ नै हो । यसका लागि हामीले डराएर भाग्नुभन्दा पनि बुद्धिमानी तरिकाले यसको नियन्त्रण र समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पनि यसका राम्रै सूचना प्रचार गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार गर्नुपर्छ ।
हामीले अहिले बार्षिक २५ देखि ३० अर्बको औषधि आयात गरिरहेका छौं भन्ने तथ्यांक छ ।
अत्यावश्यक अवस्थामा अरु मुलुकले औषधि निकासीमा रोक लगाउने देखियो । यस्तो अवस्थामा आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना कति छ ?
महाभुकम्पको समयमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि हामी नेपाली कम्पनीहरुले नेपालमा औषधि उत्पादन गरेका थियौँ यसलाई बिर्सनु हुँदैन । हामीले क्षमता भएसम्म चाँडै औषधी उत्पादन गरेर वितरण गर्न सक्छौं । त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि स्वदेशी औषधि उत्पादकको संरक्षण संवद्र्धनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि अलिकति नीतिगत स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ ।
नेपाल खुला अर्थतन्त्रमा आधारित भएकाले नेपालको सोच नै अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको छ । जसका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्थाको सिर्जना भईरहेको छ । नेपालमा आयात नीतिहरु धेरै सहज छन् । ती सहज नीतिका कारण नेपालका उद्योगधन्दा टिकाउन कठिन भएको छ । जसका लागि सरकारले आयात नीतिलाई कडाई नगर्दासम्म नेपालका उद्योगधन्दाहरु फस्टाउन तथा जगेर्ना गर्न गाह्रो परिरहन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने र सरकारले पुराना नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले सुधार गर्दै लैजाने कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो भए आयात प्रतिस्थापनमा सरकारका केही नीतिहरुले बाधा पुर्याईरहेका छन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो यस्ता कुरामा धेरै हदसम्म सरकारका नीतिले प्रभाव पार्छन् । विश्वबजारमा हेर्ने हो भने पनि, नेपाल यत्तिकै पछि परेको हैन हाम्रा नीतिहरुमा केही परिवर्तन गर्न जरुरी छ । उद्योगीलाई उद्योगमैत्री तथा उत्पादनमुखी नीति बनाउन जरुरी छ ।
नेपालमा व्यापारमूखी नीतिहरु प्रशस्तै छन् । हामीले आयात गरिएका बस्तुहरु बेच्ने काम गरिरहेका छौं जुन सजिलो कामको रुपमा लिईन्छ । उत्पादन गर्ने भनेको गाह्रो काम हो ।
औषधि उद्योगीले हरेक वर्ष उद्योगमा लगानी बढारहेका छन् । आन्तरिक खपत बढेर हो वा निर्यातको सम्भावना देखेर ?
जुन देशमा अहिले पनि ५५ प्रतिशत आयात हुन्छ त्यस्तो देशमा पहिलो कुरा त आयात प्रतिस्थापन नै प्रमुख काम हो । तर भविष्यमा नेपालको उद्योगधन्दालाई सफल बनाउ र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सरकारको सहयोग त पक्कै पनि चाहिन्छ ।
एउटा स्टेजमा नपुगि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सहज हुँदैन । अहिले पनि नेपालमा आफ्नै उत्पादन छैनन । पछिल्लो समय औद्योगिक समस्याहरु झन् बढ्दै गएका छन् । हामीले तीन तहको सरकार त ल्यायौँ तर सिस्टम ल्याउँदा निजी क्षेत्रलाई यसको लागत बढेको छ । हाम्रो खर्च अत्याधिक उच्च भएपछि हामी विश्व बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ?
कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा उत्पादन हुने अन्य बस्तुका लागि भन्सार शुल्क अत्याधिक छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
औषधि भारतबाट आयात गर्दा सरकारले ४ प्रतिशत भन्सार दर लगाएको छ । औषधिको केही कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य ४ प्रतिशतभन्दा कम पनि छ । तर हामीहरुलाई एउटा मात्रै कच्चा पदार्थले पुग्दैन । उद्योगमा अन्य थुप्रै कुराहरुको आवश्यकता छ जुन विदेशभन्दा नेपालमा महंगो पनि छ ।
त्यसैले हामीले सरकारसँग औषधि उद्योगलाई अन्तररष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन उद्योगलाई जे जे कुराहरु आवश्यकता पर्छ ति कुराका लागि सहज वातावरण बनाउन न्युन भन्सारमा आयात गर्न दिनुपर्छ भन्ने सुझाव राखेका छौं । किनकी औषधिमा जम्मा ४ प्रतिशत भन्सार लाएर भारतबाट आउँछ जुन नेपालको आयातको करिब ९०/९५ प्रतिशत हो ।
त्यसैले हामीले आन्तरिक उत्पादनमा केही सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण पनि सरकारले केही पाठ सिकेको छ । हामी निजी क्षेत्रले पनि पाठ सिकेका छौं । अभाव भयो भने ठूला देश लगायतका साना देशमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारे हामी पुर्ण शिक्षित भएका छौं ।
नेपालमा ठुला रोगका लागि भ्याक्सीन उत्पादन गर्ने उद्योगहरु आउन नसक्नुको कारण के हो ? लागत बढी भएर हो?
संसारका ठूला निजी कम्पनीलाई नेपालमा खुला प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ । यस्तो भ्याक्सीन बनाउन महंगो प्रविधि र बजार पनि सोही अनुसारको चाहिन्छ । हामीकहाँ यसको बजार पर्याप्त छैन । कतिपय भ्याक्सीनहरु विदेशी दाताले समेत नेपाललाई उपलब्ध गराएका छन । हामीले भ्याक्सीन बनाएपनि ठुला भ्याक्सीन बनाउन गाह्रो पर्छ जुन लजिकल पनि छ । त्यसपछि हामी पनि भ्याक्सीन बनाउन थाल्छौं तर पहिलो कुरा त हामीले त्यस्ता खालका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ननीतिगत सुधार गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा यस्ता ठूला भ्याक्सीन उद्योगको सम्भावना एकदमै कम छ । महंगो प्रविधि र उपकरणलाई धान्ने बजार नेपालमा छैन । त्यसैले नेपालमा भ्याक्सीन बनायो भने निर्यातको बजार खोज्नुपर्छ जुन सम्भव छैन । तर नेपालको लागि मात्रै भ्याक्सीन बनाउन थाल्यो भने त डुबिएला नी ।
नेपाली औषधि उद्योगहरुले धेरै नाफा लिए भन्ने गुनासो छ नी ? बास्तविकता के हो ?
औषधि महंगो भयो भन्नुभन्दा पहिलानेपालको औषधि कहाँको भन्दा बढी भयो भनेर मुल्यांकन गर्न अनुरोध गर्दछु । पहिलो कुरा त नेपालमा औषधि राम्रो बनाउने विधि बनाउनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको न्युनतम मापदण्ड तोक्नुपर्याे र विदेशबाट नेपालमा आउने औषधि पनि गुणस्तरिय हुनुपर्याे भन्ने गरी सरकारले एक संयन्त्र बनाउनुपर्छ । नेपाली औषधि भारतको भन्दा सस्तो छ, बंगलादेशको भन्दा धेरै सस्तो छ, पाकिस्तानको भन्दा व्यापक सस्तो छ ।
कम गुणस्तर भएका औषधि उद्योगले नेपालको बजारलाई डम्पीङ गर्न खोजेको अवस्थामा भने नेपाली औषधि त्यसको तुलनामा महंगो पर्ला तर बजारको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको औषधि कम सस्तो छैन । त्यसमा पनि एक दुईओटा कम्पनीले बढी लिएको भए सरकारले सुक्ष्म तरिकाले हेरेकै छ । सरकार आफैले मूल्य नियन्त्रण गरिरहेको छ । पछिल्लो समय मूल्य रिभिजन नगर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपालको बजारमा केही अप्ठ्यारो भने भएको छ । यसले नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।
गुणस्तरिय औषधि नेपालमा भित्र्याउन पर्छ भन्ने लबिङ गर्न नसक्नु भएको हो ?
नेपालको निजी क्षेत्रले गुणस्तरिय औषधि आयातका लागि लबिङ नगरेको होईन । धेरै गरेको छ । तर नीति बनाउने कुरामा भने सरकारले हेर्ने हो । नीति बनाउने विधायिकाले हो । विधायिकाले बनाउने कानुन र नीति बनाउने सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि केही समस्या आएको जस्तो मलाई लाग्छ । यसको समन्वय नभईकन नेपालमा औद्योगिक विकास हुन्छ भनेर यसै भन्न सकिँदैन । यदी उद्योगीलाई सरकारले साथ दिएमा जनतालाई गुणस्तरिय र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा औषधि दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।
हामीले पनि निःशूल्क पाएको औषधि यत्तिकै खाँदैनौं । किनकी हामीलाई पनि गुणस्तरियतामा शंका छनी । नेपालको औषधिमा ढुशी लागेर बिग्रियो भनेर समाचारहरु आएकै हुन नी । हामी समस्या देख्छौं तर समाधान तिर लाग्दैनौं । हामीले अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको खेलाँची गरेको जस्तो होईन धेरै काम गर्नु बाँकी छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले एक्लै सक्दैन सरकारको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो पिँढीले विकास गर्न सकेन भने त अब नेपाल धेरै पछि पर्छ ।
नेपाल सरकारले भनेजस्तै औषधिमा ढुक्क हुने अवस्था छ ?
जे औषधि नेपालमा बनिरहेको छ त्यसको भण्डारण हामीसँग ४ देखि ५ महिनाको लागि चाहिने औषधि छ । कोरोना भाईरसका कारण प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था छैन हामीसँग आयात गरिने औषधिको भन्डारण पनि सोही अनुसार छ । तर हामीसँग औषधिको साँच्चिकै अभाव हुने देखियो भने नेपालमा चाहिने तर नेपालमा नपाईने बस्तुहरुको अहिलेदेखि नै आयात गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसका लागि सरकारले कहिले कति औषधि या यस्ता बस्तु चाहिने हुन भनेर क्वान्टीफाई र प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ । जुन सरकारले पनि गर्नुपर्छ । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण नेपालमा नपठाउने भन्ने मानसिकतालेभन्दा पनि आफ्नै देशमा अभाव हुन्छ की भनेर होला । तर भारतले पनि अन्य धेरै देशबाट आयात गर्ने गरेको छ । हामीले २०७२ सालमा भारतले सबै बस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हाम्रो बजार धान्न सकेका थियौं । अहिले सक्दैनौ भन्न सुहाउँदैन ।
यसमा चिन्तित हुनुपर्ने बेला आएको छैन । तर हामीले चाहिनेभन्दा बढी खरिद गरेर राख्न थाल्यौं भने बजारमा कृत्रिम अभाव हुन्छ । त्यो खालको कृत्रिम अभाव भयो भने नेपालमा भएको भन्डारणले पनि नपुग्ने होकी भन्ने चिन्ता त छँदैछ ।
यो अवस्थामा सरकारले भारतलाई औषधि खुलाउन आग्रह गर्ने की नेपालमै उत्पादन गर्नमा प्राथमिकता दिने ?
सरकारले त हामीलाई बोलाएर तपाईँलाई के सहज हुन्छ यो यो चिज तपाईँहरु बनाउनुस भन्नुपर्ने हो । हामीले सरकारसँग भेटघाट गरेर आफ्ना सुझावहरु पनिराखेका छौं । हामीले चाह्यौं भने धेरै कुरा नेपालमै बनाउन सक्छौं जसको लागि हामीलाई सरकार र जनताको पनि सहयोग चाहिन्छ ।
नेपाली जनतामा स्वदेशी भन्दा विदेशी उत्पादन खपत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । जसका लागि सरकारले हरेक उत्पादन कति चाहिने हो भन्ने कुराको एकिन गरिनुपर्छ सोही अनुसार बनाउन सकिने भए बनाउने र नसकिने भए सोही अनुसार आयात गर्न सकिन्छ ।
सीएनआईको निष्कर्ष, बजेटले उद्योगी ब्यवसायीका माग सम्बोधन गरेको छ
बजेट माथि उद्योगी व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया, हेर्नुहोस कसले के भने ?
कोरोना भ्याक्सिन खरिदमा होडबाजी, ट्रायल पिरियडमै अमेरिकाले बुक गर्यो १.२ विलियन डलरको ३ करोड वटा खोप
कोरोनाको औषधि उत्पादन गर्ने पहिलो देश बन्यो बंगलादेश, १२७ देशमा निर्यात गर्न अनुमति
कोरोना भाईरसका बिरामीलाई अस्पतालले औषधिको रुपमा दिन थाल्यो गाँजा
बीसीजी खोपलाई कोभिड १९ संक्रमित व्यक्तिमा परीक्षण गर्न अनुमति, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनको असरबारे अध्ययन सुरू
उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णयको परिसंघद्धारा स्वागत, पास वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन आग्रह
अर्थ समितिमा निजीक्षेत्रको माग : कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउ, जीडीपीको ५ प्रतिशतको राहत प्याकेज ल्याउ
अर्थमन्त्री बर्खास्तीको मागसहित सेयर लगानीकर्ता दबाब समुहको आन्दोलको घोषणा, आमरण अनशनले बढ्ला त बजार ?